စင်ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူစီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများစင်ကာပူရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှ Residency၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ Residency၊ စင်ကာပူတွင်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စင်ကာပူတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စင်ကာပူသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စင်ကာပူရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ စင်္ကာပူရှိရွှေဗီဇာ၊ စင်ကာပူရှိရွှေဗီဇာ၊ စင်ကာပူရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ စင်ကာပူရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောရွှေဗီဇာစင်ကာပူရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စင်ကာပူရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ထပ်ဆောင်းအထောက်အပံ့ဖြင့်စင်္ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်စင်ကာပူတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် 2,500,000
၂၀၁၈ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ပျော်ရွှင်မှုအစီရင်ခံစာအရစင်ကာပူအား“ အရှေ့တောင်အာရှတွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံ” အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ စာမေးပွဲသည်စင်ကာပူတွင်မိသားစုသည်ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များရှိသော်လည်းမိသားစုနှင့်ကွန်ယက်သည်အခြားအရာအားလုံးထက်အဆမတန်များကြောင်းထပ်လောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်အလှည့်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်ရွှင်လန်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းထုတ်လုပ်ကူညီပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူသည်၎င်း၏တည်ငြိမ်သောနိုင်ငံရေးဝန်းကျင်ကြောင့်လူသိများသည်။ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အာဏာရှင်အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုသည်ယုတ္တိရှိပြီးတရားမျှတမှုရှိပြီးတရားဥပဒေစံနှုန်းအပေါ်မူတည်သည်။ အများပြည်သူအာဏာပိုင်များ၏အထင်ရှားဆုံးသောစံနှုန်းမှာဤနိုင်ငံငယ်၏ခံနိုင်ရည်နှင့်တိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အတွက်တရား ၀ င်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ယင်းသည်မကြာခဏဆိုသလိုသဘောမတူစရာကောင်းသော်လည်းခက်ခဲ။ ပညာသတိရှိသောရွေးချယ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ အများပြည်သူအာဏာပိုင်များသည်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအားအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်နှင့်နောင်လာမည့်အရာများအတွက်စဉ်းစားရန်စတော့များကိုထားရှိသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်သူ Lee Kuan Yew ၏ဖော်ပြချက်အရစင်ကာပူသည်တတိယကမ္ဘာFirstရိယာတွင်ပထမကမ္ဘာအခြေအနေကိုကမ်းလှမ်းထားသောကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအဖွဲ့အစည်း ၉၀၀၀ နီးပါးကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကြီးကျယ်သောအုပ်ချုပ်မှုသည်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေရန်အာမခံချက်ရှိသောသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောမူဘောင်တစ်ခုရရှိထားသဖြင့်နေထိုင်သူများသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောဘ ၀ များရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူသည်ညစ်ညမ်းသော၊ ပွင့်လင်းသောစီးပွားရေးအခြေအနေကိုအလေးအနက်ထားသည်။ စင်ကာပူဆိပ်ကမ်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစက်မှုနိုင်ငံများမှပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းခဈေးနှုန်းများကိုဗဟိုပြုသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေရေရှည်တွင်စင်ကာပူသည်စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီးယနေ့တွင်၎င်းသည်ဆန်းသစ်သောအလုပ် (R&D) စင်တာ၊ ဇီဝလက်တွေ့စင်တာ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အကောင့်အာရုံစိုက်မှုနှင့်အာရှ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာသည်။ ယနေ့တွင်စင်ကာပူသည်သတင်းအချက်အလက်အခြေပြုစီးပွားရေးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆွဲဆောင်သည်။ ၎င်း၏ပွင့်လင်းသောကုန်သွယ်မှုချဉ်းကပ်မှု၊ လူမှုရေးအပေါ်မှီခိုမှု၊ စာရင်းပြုစုမှုမူဘောင်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာပေးစာယူဆက်သွယ်မှုများသည်အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသောစျေးကစားသူများ၏ကမ်းခြေကိုလည်ပတ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြေယာနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်လာသည်နှင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအကြီးအကဲများအနေဖြင့်ဗဟိုကိုယ်စားလှယ်များရန်ပုံငွေသို့၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များလျော်ကြေးငွေအနည်းငယ်ပေးဆောင်ရန်လိုသည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်သည်စင်ကာပူ၏စီးပွားရေးကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖွင့်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထိုနိုင်ငံသည်အခွန်နည်းပါးသောကြောင့်လူသိများသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်တစ် ဦး ချင်းဝင်ငွေခွန်နှုန်းသည် ၀.၀% မှစတင်ကာနေထိုင်သူများအတွက် ၂၂% နှင့် ၀ င်ငွေအခွန်နှုန်းမှာ ၁၅% နှင့် ၂၂% အထိရှိသည်။ စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီများ၏ ၀ င်ငွေခွန်သည်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၈.၅% ဖြစ်ပြီးအကျိုးအမြတ်အတွက်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ နှင့် ၁၇% သည်စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ အထက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အမြတ်အခွန်မျှဒိုမိန်းတာဝန်နှင့်မျှမအရင်းအနှီးထပ်တိုးအခွန်လည်းမရှိ။
လူမှု - လူမှုပတ်ဝန်းကျင်
စင်ကာပူ၏လူမှုရေးနှင့်လူမျိုးရေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်မတူကွဲပြားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းဖြစ်သည့်မလေးရှား၊ တရုတ်၊ စင်ကာပူ၏လူနေမှုပုံစံသည်လူမှုရေးပေါင်းစုံဖြစ်ပြီးလူမျိုးစုကွန်ယက်တစ်ခုစီသည်သူတို့၏ထူးခြားသောဘဝပုံစံကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးတစ်ပြိုင်နက်တည်းသာယာမှုရှိကြသည်။ စင်္ကာပူ၏အများပြည်သူသည်နှောင်းပိုင်းတွင်အပြင်လူများ၏ပေါင်းစည်းခြင်းကြောင့်နာမည်ကြီးသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လေးစားမှုရှိသည်။ မြင့်မားသော accentuation နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နှင့်လူမျိုးရေးသဘောတူထားသည်။ စင်ကာပူအစိုးရသည်အခြေခံအားဖြင့် Shared Vales (၅) ခုကိုသတ်မှတ်ထားပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောယူနစ်အဖြစ်မိသားစု; တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကွန်ယက်ကျောထောက်နောက်ခံနှင့်လေးစားမှု; သဘောတူညီချက်မတိုက်ဆိုင်; လူမျိုးရေးနှင့်တင်းကျပ်သော congruity ။
စင်ကာပူ၏လူ ဦး ရေသည်အာရှရှိသာယာဝပြောရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာမြင့်မားမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံသည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည့်အခြေခံအုတ်မြစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အာဏာပိုင်များအတွက်လည်းထင်ရှားသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အခြေအနေသည်အစက်အပြောက်၊ ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုရှိသည်။ စင်ကာပူသည်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ ဤမူဘောင်၏အဓိကကျသောအချက်မှာ 'Medisave' ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင်အလုပ်လုပ်နေသောအလုပ်ရှင်တစ် ဦး စီသည်ဗဟို Provident Fund ရန်ပုံငွေအကောင့်၏ Medisave အပိုင်းကိုတစ်လမှတစ်လအနေဖြင့်လိုအပ်သည်။ ဤသည်ထို့နောက်လက်တွေ့ကုန်ကျစရိတ်၏အရစ်ကျများအတွက်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအရေးပေါ်ဆေးခန်းများနှင့်စင်တာများတွင်အများပြည်သူအာဏာပိုင်များသည်ကြီးကျယ်သော၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများပေးသည်။ စာရင်းသွင်းထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးသိုလှောင်ရုံများအပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစျေးကွက်များ၊ ဆေးဝါးများသည်အသုံးချရန်အတွက်သင့်တော်ပြီးတန်ဖိုးမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်ရှိသည်။ အားလုံးလက်တွေ့အထူးကုသက်ဆိုင်ရာအလောင်းတွေနှင့်အတူစာရင်းသွင်းနေကြသည်။
စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ စင္ကာပူႏုိင္ငံ
စင်ကာပူ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ယူလုပ်ဆောင်သည်
PR စနစ်လက်ခံရရှိပြီးနောက် ၂-၆ နှစ်
အခွန် / စီးပွားရေး
ဘာကြောင့်စင်ကာပူရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် Residency ကိုသွားရမလဲ
စင်ကာပူသည်အရှေ့အာရှတွင်ကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးပြီးမြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှု၊ စနစ်တကျနှင့်ကောင်းစွာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းရှိသည့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ပြည်သူ့ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္comparableာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ၊ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောမြို့ကြီးများအတွက်ရာဇ ၀ တ်မှုနိမ့်ကျမှုသည်၎င်းအားလူနေမှုနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်နှစ်လိုဖွယ်အကောင်းဆုံးလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဒေသတွင်းရှိအထင်ရှားဆုံးသောဘဏ္financialာရေးအချက်အချာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏လျှောက်လွှာတွင်အပိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘဲဇနီးမောင်နှံနှင့်ကလေးများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်လည်းရရှိမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်သင်ကြင်ဖော်၊ ခင်ပွန်း၏မိဘများနှင့် ၂၁ နှစ်ကျော်လက်မထပ်သေးသောကလေးများသည်သက်တမ်း ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိနိုင်သည်။ ။
Residency စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
အရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူများသည်စင်ကာပူနေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီအတွက်စာရင်းစစ်ဘဏ္financialာရေးရှင်းတမ်းများအပါအ ၀ င်သိသိသာသာစီးပွားရေးအတွေ့အကြုံကိုပြသရမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုအတွက်အနည်းဆုံး SGD သန်း ၅၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅.၈ သန်း) သည်လိုအပ်သောနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှလည်ပတ်မှုဖြစ်ပြီးအိမ်ခြံမြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများအတွက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၃.၁ သန်း) ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်နှစ်မပြည့်မီပြီးဆုံးသည်။ လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်လိုအပ်သောငွေပေးချေမှုများကိုအချိန်မီပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိသောအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုသင်နှင့်သင်နှင့်သင်၏ရင်းနှီးသောမိသားစုကိုပေးလိမ့်မည်။ အဖွဲ့ဝင်များ။ သင်၏စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လှုပ်ရှားမှုပေါ် မူတည်၍ သင်၏စင်ကာပူတွင်နေထိုင်သောအချိန်ကိုနောက်ထပ် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရန်အတွက်စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂.၅ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၈ သန်း) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုတွင်တောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ခြင်း (အစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ) တနည်းအားဖြင့်သင်သည်တူညီသောငွေပမာဏကိုစင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည့်လက်ခံထားသည့်ရန်ပုံငွေတွင်ထည့်နိုင်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်၏အစတွင်ပေးဆောင်ရမည့်လိုအပ်သောနှင့်ပြန်အမ်း။ မရသည့်လျှောက်လွှာကြေးသည်စင်ကာပူဒေါ်လာ ၇၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀) ဖြစ်သည်။
စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ စင်္ကာပူအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ စင်ကာပူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စင်ကာပူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်စင်ကာပူမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်စင်ကာပူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရုံသာမကစင်ကာပူရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည်။ စင်္ကာပူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ စင်ကာပူရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်စင်္ကာပူအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ စင်ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ စင်ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သော Residency၊
စင်ကာပူမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ ခုသို့စင်ကာပူနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစင်ကာပူမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
စင်ကာပူမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
စင်ကာပူမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့စင်္ကာပူ၌ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစင်ကာပူမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
စင်ကာပူမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်အစီအစဉ်။
စင်ကာပူမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကစင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်၎င်းတို့နေထိုင်သော Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာသွားချင်သည်ဆိုသည့်အမြင်ဖြင့်ရှုထောင့်မှပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စင်္ကာပူရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်အဆက်အစပ်ရှိပြီးကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးစင်ကာပူရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်စင်ကာပူနေထိုင်ခွင့်
စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏ Residency သည်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်စင်ကာပူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စင်ကာပူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်စင်ကာပူသို့မဟုတ်စင်္ကာပူသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုစင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Residence Permit ရရှိရန်နှင့်ဖောက်သည်များထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
စင်ကာပူအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းရန်အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်စင်ကာပူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏စင်ကာပူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင့်အားမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်စင်ကာပူမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် စင်္ကာပူတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စင်္ကာပူသို့ဖြစ်စေ၊
နေထိုင်ခွင့် စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် စင်္ကာပူတွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် စင်္ကာပူအတွက် စင်ကာပူရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက စင်္ကာပူရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်မှု၊ စင်္ကာပူတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းစသည်တို့အတွက်စင်ကာပူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စင်ကာပူ၏ထောက်ခံမှုကိုမရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် စင်္ကာပူအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူအတွက် စင်ကာပူရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက စင္ကာပူႏုိင္ငံ စင်ကာပူရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် စင်္ကာပူမှာရှေ့ရပျ စင်္ကာပူရှိမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်စင်ကာပူရှိဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းစင်ကာပူအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုလက်ခံရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် စင်္ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်စင်ကာပူ၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်စင်ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်စင်ကာပူအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုစင်ကာပူနိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့ပေးသောစင်ကာပူနိုင်ငံအတွက် dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရယူခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောစင်ကာပူအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရှေ့နေများ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏ Residency စင်ကာပူနိုင်ငံမတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်စင်ကာပူအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးစင်ကာပူအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ သင်၏ Residency သည်စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ စင်္ကာပူအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ စင်ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရ Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ စင်္ကာပူအတွက်
စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူစင်ကာပူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့်၊ စင်ကာပူတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency မှစင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ စင်ကာပူနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်အောင်စင်္ကာပူအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ခုအောက်တွင်သင်မတွေ့နိုင်ပါ။
စင်ကာပူရှိမိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်စင်ကာပူနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်အကူအညီဖြင့်စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
စင်္ကာပူသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် စင်္ကာပူရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကူညီနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအကြံဥာဏ်တွေလိုအပ်နေတယ် ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ် စင်ကာပူရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် စင်ကာပူနိုင်ငံကမင်းစီစဉ်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိစီးပွားရေးကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် စင်္ကာပူမှာလက်ငင်းစတင်ဘို့။
စင်ကာပူရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ စင်္ကာပူရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် စင်္ကာပူတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
စင်္ကာပူအတွက် Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ စင်္ကာပူအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, စင်ကာပူအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
စင်္ကာပူရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
Residency ပြီးနောက်စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း စင္ကာပူႏုိင္ငံ.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုစင်္ကာပူတွင်ပေးပါသည်
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
စင်ကာပူရှိ App Development
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Software Development
စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရားဝင် Residency ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စင်ကာပူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်စင်ကာပူတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ စင်ကာပူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စင်ကာပူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်စင်္ကာပူတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
Residency သည်စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကသင်၏ကိုယ်စားတရား ၀ င်ဆောင်ရွက်မှုအားလုံးအတွက်စင်ကာပူအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စင်္ကာပူသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်စင်္ကာပူသို့လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ရှေ့နေကိုတရား ၀ င်တရားဝင်ဖြစ်သင့်ပြီးစင်ကာပူပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်ပယ်နယ်လ်သို့မဟုတ်စင်ကာပူကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်စင်္ကာပူ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်စင်္ကာပူ၏နေထိုင်မှုကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှု၊ စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှကူညီခြင်း၊ စင်္ကာပူမှာ။
စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့် | စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | စင်္ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစင်္ကာပူနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုစင်ကာပူရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်စင်ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစင်္ကာပူနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်စင်ကာပူနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်စင်ကာပူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံတို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုစသည်တို့ကိုလျှောက်ထားပါ။ အကောင်းဆုံးမှာစင်ကာပူရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်စင်ကာပူရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုစင်ကာပူ | စင်္ကာပူရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ | စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေရှေ့နေများ စင်္ကာပူရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စင်္ကာပူအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး စင်္ကာပူအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စင်္ကာပူ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုစင်ကာပူ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံသို့လျှောက်ထားသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်စင်ကာပူ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ စင်ကာပူရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စင်ကာပူရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
စင်္ကာပူအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
စင်ကာပူရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်စင်္ကာပူ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ စင်ကာပူရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ စင်္ကာပူရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စင်ကာပူရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်စင်္ကာပူအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
စင်္ကာပူအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | စင်္ကာပူရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ စင်္ကာပူရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ စင်္ကာပူရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ စင်္ကာပူအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စင်ကာပူရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်စင်ကာပူရှိအေးဂျင့်များသည်စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
Residency သည်စင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency သည်စင်ကာပူအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားပြီးအသားတင်အမြတ်ရသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ Residency မှစင်ကာပူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခကိုသာပေးဆောင်သည်။ Residency အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေများအားလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှစင်ကာပူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ Residency သည်အာဖရိကမှစင်္ကာပူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှစင်ကာပူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Residency၊ တောင်အမေရိကမှစင်ကာပူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှစင်ကာပူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှစင်ကာပူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှစင်ကာပူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှစင်ကာပူတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှစင်ကာပူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ ယူအေအီးမှစင်္ကာပူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု စင်္ကာပူအတွက်
link ကိုမှ စင်ကာပူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်